Vaovao - fitandremana amin'ny fampiasana ny tontonana ivelany
Rehefa mikarakara tontonana ivelany rindrina sy mampidina sy mampidina ny tontolon'ny rindrina ivelany, ny làlan'ny halavan'ny tontonana dia tokony hampiasaina ho toy ny lafiny fihenjanana, ary ny tontonana dia tokony hokarakaraina tsara mba hisorohana ny fifandonana sy ny fahasimban'ny takelaka;
Rehefa mitantana takelaka tokana dia tokony afindra miakatra ilay ravina mba hialana amin'ny fiovan'ny ravina.
Ny faritry ny fitaterana dia tsy maintsy fisaka, ary ny rindrina ivelany dia tokony hamboarina aorian'ny fametahana marindrano mba hisorohana ny fahasimban'ny vokatra noho ny fatorana be loatra amin'ny takelaka ivelany mandritra ny fanamboarana;
Ahenao ny hovitrovitra mandritra ny fitaterana hisorohana ny fifandonana sy ny orana.
Ny tontolo iainana hametrahana takelaka rindrina ivelany dia tokony asiana rivotra sy maina, ary ny tranokala dia tokony ho fisaka sy mafy;
Rehefa mampiasa ondana hazo toradroa dia alao antoka fa tsy simba ny vokatra;
Rehefa apetraka amin'ny rivotra misokatra, ny takelaka rindrina ivelany dia tokony hosaronan'ny lamba tsy tantera-drano;
Rehefa mitahiry takelaka ivelany amin'ny rindrina dia tokony halavirina amin'ny faritra avo sy hamandoana avo izy ireo, ary tsy tokony afangaro amin'ny fitaovana maloto toy ny menaka sy akora simika.
Rehefa manokatra ny fonosana valizy ivelany ianao dia tokony apetrakao aloha, avy eo esory eo an-tampon'ny fonosana vokatra, ary esory avy eo ambony ka hatrany ambany ny tabilao;
Aza sokafana avy eo amin'ny sisiny ny rindrina ivelany mba hialana amin'ny gorodona.
Rehefa tapahina ny tontolon'ny rindrina ivelany, ny firaketana vy manapaka dia hapetaka amin'ny tampon sy ny firaketana ny tontonana, izay mora harafesina. Tokony hesorina ny fametrahana vy sisa.
Mandritra ny fananganana dia tokony horaisina ny saina mba hiarovana ny ambonin'ilay tabilaon'ny rindrina ivelany mba hialana amin'ny ratra sy ny fiantraikany.
Sorohy ny asa fanamboarana rehefa avy ny orana;
Mandritra ny dingan'ny fanamboarana dia sakano ny atin'ny rindrin'ny rindrina ivelany tsy hifandray amin'ny rano hisorohana ny rano ao anaty tsy hisintona avy any ambony, ka hiteraka korontana sy harafesina amin'ny tontolon'ny tontonana, mampihena ny androm-piainany.
Aza ampiasaina amin'ny hafanana avo, hamandoana avo, ary toerana fanariana asidra (toy ny efitrano fandrahoana, efitrano fandoroana, loharano mafana, fikosoham-taratasy, sns.).
Ho an'ny lalamby mivoaka avy amin'ny rindrina, ny fantsom-panafody amin'ny rivotra sy ny fantsona condensate, ny refy mifanaraka amin'izany dia tokony hotehirizina alohan'ny fametrahana ny takelaka. Aza manokatra lavaka aorian'ny fametrahana ny takelaka.
Raha misy mpikambana manohana ny aircon, ny vavahady famonoana ary ny fotodrafitrasa hafa ambonin'ilay rindrina, dia tokony hotanterahina ny fantson-jiro sy ny dingana hafa alohan'ny hametrahana ireo takelaka misy rindrina sy ireo fitaovana fanamafisam-peo.